सुर्खेत घाटगाउँका राजीहरू ४५ बर्षपछि वास्तविक जग्गा धनी बने ! – Rajyasatta.com
Reading Now सुर्खेत घाटगाउँका राजीहरू ४५ बर्षपछि वास्तविक जग्गा धनी बने !
घाटगाउँ, असोज १८ – यस्तो उमंग त हाम्रो जीवनमा कहिल्यै आएको थिएन ।” एक हातले जग्गाको लालपुर्जा अर्को हातले खुसीका आँशु पुछ्दै सुर्खेत घाटगाउँकी प्रमिला राजीले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन् । “हामीलाई सुकुम्बासी भनेर हेला गर्ने गाउँका मानिसहरूको आज भोक निन्द्रा हराएको छ होला !” संगै बसेका फकिरा राजीले खुशीसंगै आक्रोश मिसिएको भावमा उल्लेख गरे ।